Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » India na -agbasa ozi ọma » IATO Execs Ihu Iche na Gọọmentị India
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • India na -agbasa ozi ọma • News • Iwughachi • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Ndi IATO zutere Mịnịsta na-ahụ maka Ego
Taa, Maazị Rajiv Mehra, Onye isi ala, na Maazị Pronab Sarkar, Onye isi ala gara aga, nke Indiantù Na-ahụ Maka Njem Nleta nke India (IATO), òtù ndị omeiwu nke mba, kpọrọ Hon. Mịnịsta na-ahụ maka ego, Oriakụ Nirmala Sitharaman, n'ụlọ ọrụ ya.
Ndị nnọchi anya IATO zutere ikele ya maka ikpochapụ Ọrụ Mbupụ si India Atụmatụ (SEIS) maka ndị na-enye ọrụ.
Tụkwasị na nke a, ha kelere ya maka visa elektrọnik elektrọnik nke 5 lakh maka ndị njem si mba ofesi, yana inye mgbazinye ego na ịchọ enyemaka site n'aka gọọmentị maka mbughachi nke ndị njem na idozi nsogbu ndị echere.
Nke a ga - enyere ndị ọrụ njegharị India aka ịsọmpi na mba ndị agbata obi iji dọta ọtụtụ ndị njem na India.
Okwu ndị esitere n'aka Hon. Onye Minista ga-ejigide pasent SEIS Scrips nke pasent 7 nke enyere ndị na-eme njem nlegharị afọ ole na ole gara aga. Ha kwuru na IATO na-arịọ arịrịọ ka pacenti pacenti pachaa pacenti iri wee nọrọ na pacenti asaa ma ọ bụrụ na enweghị ike ịba Ha kwukwara na ekwesighi ịkọcha ihe ọ bụla, yana ndị SEIS ndị na-eme njem ga-ahapụrịrị na-enweghị mmebi ọ bụla na pasent.
Ha na Hon. Mee ihe nlele nke ngwongwo na Taxtụ Ọrụ (GST) na ndị ọrụ njegharị ma rịọ ka iwepu nsogbu a site na ịkwanye GST na uru a hụrụ nke nwere ike ịbụ pasent 10 nke oke ịgba ụgwọ nke ndị ọrụ njem. Nke a ga - enye ohere ka akwụ ụtụ ọrụ a na pasent 18 na akara ngosi pasent 10, nke pụtara na ọnụego GST dị irè na ngwugwu ngwugwu ga - arụ ọrụ rue pasent 1.8 nke oke ụgwọ nke ndị na - eme njem nleta na ndị ahịa na - enweghị ntinye. Ebe E Si Nweta Taxtụ (ITC). A rịọkwara ka GST na Ngwakọta Ngwaahịa na Taxtụ Ọrụ (IGST) pụọ kpamkpam na ọrụ ndị enyere na mpụga India, ya bụ, na mba ndị agbata obi ọbụlagodi na ngwugwu ahụ gụnyere Njegharị India, dị ka nke a na-akpata azụmaahịa nke ndị na-eme njem. N'ihi ụtụ isi, ntinye akwụkwọ ga-abịakwute ndị na-eme njem nleta na India kama ntinye akwụkwọ dị otú a na-aga ndị ọrụ njegharị dabere na mba ndị agbata obi. Nke a ga - agbakwunye mba ahụ nnukwu ego.
Okwu ọzọ eburu bụ levy nke Colletụ Taxtụ Isi na Isi mmalite (TCS) maka ire ngwugwu njem nke mba ofesi. A rịọrọ ka TCS ghara ịmetụta ndị mmadụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị na-abụghị ndị amaala mba ọzọ, ndị njem nleta, ma ọ bụ ndị na-eme njem nlegharị si mba ọzọ dị na mpụga India maka ịzụta nchịkọta njem site na Onye ọrụ njegharị India maka mpụga India.